samedi, 07 avril 2018 21:12
Dama: Namaly babena ny Sekoly Seminera Mandaniresaka Antsirabe nianarany
Manamarika ny famaranana ny fankalazana ny faha-50 taona nijoroany ny Sekoly Seminera Mandaniresaka-Antsirabe. Isany nanamarika izany ny valan-dresaka niarahana tamin'i Dama (Mahaleo).
Lohahevitra novoaboasany tamin'ireo tanora mpianatra tao amin'ity sekoly ity ny "valibabena ho an'ny taniko", inona no tokony hataontsika ho an'i Madagasikara, izay nahitana soa ka tokony ho valiana soa.
samedi, 07 avril 2018 20:50
Climate school: Fanentanana mahakasika ny fiovaovan’ny toetrandro an-tsekoly
Io no hetsika entin’ny sampandraharaham-paritry ny tontolo iainana sy ny haivoahary ary ny ala miady amin’ny fiovaovan’ny toetrandro ato anatin’ny faritra Boeny.
Sekoly 19 nanaovana fanentanana sy nandray anjara tamin’ny diabe, radio crohet ary slam.
Omaly no nizarana ny loka ho an’ireo mpandresy teny amin’ny Complexe Sportif Ampisikina notronin-dRamatoa minisitry ny tontolo iainana sy ny haivoahary ary ny ala, Ndahimananjara Johanita.
Ankoatra ny fitaovana fikarakarana zaridaina azon’ny laharana voalohany dia hitsidika ny valan-javaboahary Ankarafantsika ihany koa ireo mpianatra avy amin’ny sekoly tsy miankina La Bonne Etoile androany.
samedi, 07 avril 2018 15:21
Sakaraha: Le CHRD doté d’un nouveau bloc opératoire
Désormais, les patients de Sakaraha, dans la Région Atsimo Andrefana, et des zones périphériques n’auront plus besoin de rejoindre Toliara pour les opérations chirurgicales classiques, ainsi que pour les accouchements par césarienne.
C’est une nouvelle avancée dans le cadre de l’amélioration de la qualité des services et des soins de proximité dans ce District qui compte environ 169 000 habitants.
samedi, 07 avril 2018 14:04
CENI: Hikatona ny 15 avrily ny lisim-pifidianana
Natao tetsy amin'ny CENI ny fivoriana "Cadre de concertation" izay niantsoana ireo mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena.
Fantatra fa hifarana ny 15 avrily ny lisim-pifidianana hiatrehana ity taona 2018 ity.
samedi, 07 avril 2018 08:00
Sambava: Andron’ny Zandarimariam-pirenena
Nitohy ny fankalazana ny 2 avril izay andron'ny Zandarimariam-pirenena. Tsy diso anjara tamin’izany ny Groupement SAVA. Ny andron’ny 05 aprily 2018 dia nanolotra ra maimaimpoana ho an’ny hopitaly CHRR Besopaka izy ireo, ka Zandary miisa efapolo teo no nandray anjara tamin’izany.
Betsaka ny filana rà ato amin’ny CHRR Besopaka, sady eo ihany koa ny hoe Zandarimaria miasa ho any vahoaka ka manatanteraka izany izahay izao, hoy ny Lieutenant-Colonel Besoa Sirnot (Commandant du Groupement SAVA).